नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : झोले र चोलेहरूको भागबन्डामा रमाउने र आरती उतार्ने भीडमा तिम्रो कुरा कतिले सुन्लान् र बुझ्लान् !
झोले र चोलेहरूको भागबन्डामा रमाउने र आरती उतार्ने भीडमा तिम्रो कुरा कतिले सुन्लान् र बुझ्लान् !
उनका पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो । यस्तो बेथिति देख्दा कटक्क मन त दुख्ने नै भयो । करिब ७ मिनेटको ढिलो मन्तव्य र व्यक्त भावनाले माटोको मर्म त बुझेको छ तर थाहा छैन यो मन्तव्य र व्यक्त भावना कतिले बुझ्छन् ! झोले र चोलेहरूको भागबन्डामा रमाउने र आरती उतार्ने भीडमा तिम्रो कुरा कतिले सुन्लान् र बुझ्लान् खोइ राजन !!